I-Black Shark 2 Pro yeyona nto ithengiswa kakhulu e-China | I-Androidsis
I-Black Shark 2 Pro yeyona nto ithengiswa kakhulu e-China
IBlack Shark 2 Pro yaziswa ngokusesikweni kwiveki ephelileyo. Ifowuni entsha yokudlala yohlobo lwaseTshayina, Ebizwa ukuba ibe sisalathiso kweli candelo lentengiso. Ukuphehlelelwa kwayo eYurophu kusafuneka silinde ithutyana, nangona e-China sele ithengisiwe, ngentengiso elungileyo ukuza kuthi ga ngoku.
Ukuphehlelelwa okucacisa ngokuqinisekileyo ukuba Iifowuni zeXiaomi zivelisa umdla kweli lizwe. Ukongeza ekubeni kukunyusa kolu luhlu lweefowuni zemidlalo ezivela kuhlobo lwesiTshayina. Kuya kufuneka ukuba kukhunjulwe ukuba le Black Shark 2 Pro Ibifumaneka ukubhukisha iiveki ezimbalwa ngoku.
Le Black Shark 2 Pro yasungulwa okwesibini e-China, Emva kokumilisela ibhetshi yokuqala kule veki. Njengoko sele yenzekile neyokuqala, ifowuni iphinde yasetyenziswa kwakhona. Ezi nguqulelo zimbini ngokubhekisele kugcino zathengiswa kwivenkile ekwi-intanethi kwi-intanethi, neziphumo ezilungileyo.
Ke ukuthunyelwa ezimbini zokuqala ezithe zasungulwa kule fowuni yeXiaomi zithengise kakuhle kwaye sele zithengisiwe. Oko kucacisa ukuba umnxeba unomdla. Ngelishwa, asinazinkcukacha ngenani leeyunithi Ezi zithengisiwe kwezi ntengiso zimbini zokuqala.
Nangona abasebenzisi base China abafuna ukuthenga le Xiaomi Black Shark 2 Pro abayi kulinda ixesha elide. Ukusukela namhlanje, nge-5 ka-Agasti, ukuthunyelwa okutsha kwesixhobo kusungulwe e-China. Ke uphawu alufuni kuchitha xesha kule meko kwaye lusebenzise umdla wentengiso.
Okwangoku siyaqhubeka azikho iindaba malunga nokuqaliswa kwale Black Shark 2 Pro eYurophu. Inkampani khange ithethe nto kwintetho yayo kwaye akukho datha intsha ikhutshiweyo. Kungabakho kungekudala, nangona ukubakho kweefowuni zayo zokudlala eYurophu kungazange kube yeyona nto ibalaseleyo, ke kuyakufuneka silinde ukubona ukuba iyasungula na okanye hayi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » I-Black Shark 2 Pro yeyona nto ithengiswa kakhulu e-China
Ezona zixhobo zeencwadi zomsindo ze-Android
Ukuhlaziywa okutsha kwe-OPPO Fumana Z